Uhlu lwababhalwayo: Ukuphefumulelwa Kwezakhiwo kanye Nocwaningo Lokuncintisana Lwabathengisi Be-imeyili | Martech Zone
Uhlu lokubhaliwe izimakethe ngokwazo njenge-Email Newsletter Search Engine, enezikhombo ezingaphezu kwezigidi ezi-5 zezincwadi ze-imeyili zokucinga kuma-Publishers angaphezu kuka-400,000. Amathuluzi afana nalawa ayamangalisa kubaqambi abafisa ukuthola ugqozi kumikhiqizo eyinhloko noma abathengisi bedijithali abafuna ukubona ukuthi izimbangi zabo zithumela nini nokuthi hlobo luni lwezincwadi zezindaba namadili adluliswayo.
Uma uyibhizinisi elingenazo izinsiza zokuhlola, lawa mathuluzi angasiza kakhulu ngoba abamemezeli abakhulu basebenzisa umzamo omkhulu ekutholeni ama-imeyili abo kahle!
Uhlu lokubhaliwe lunezici ezimbalwa nezinzuzo ezimbalwa:
Ukusesha Okuthuthukile Nokuhlunga - Sesha ngesihloko, igama lomthumeli, ikheli le-imeyili lomthumeli, umbhalo womzimba noma i-URL. Hlunga ngosuku, izinga le-Alexa nombala imbala.
Amagama Okuqhamuka Kwamazwi Asemqoka - Amathrendi we-Spot ngesibukeli sethu somugqa wesikhathi esisebenzisanayo, bese usondeza kuzikhathi ezibalulekile nezinsuku ezithile ukuze ubhekisise.
I-Daily Digests - Gcina isikhathi futhi ungalokothi uphuthelwe umkhankaso ngezingxoxo ze-imeyili zansuku zonke zemikhankaso emisha yemikhiqizo yakho oyithandayo.
Ukuvuselelwa Kwesikhathi Sangempela - Imikhankaso iyatholakala ngokusesha lapho ithunyelwa khona, futhi ifakwe kungobo yomlando ngokuphelele.
24 / 7 Ukusekela - Balapha lapho ubadinga, noma ngabe kungumbuzo, umbiko wesiphazamisi noma isiphakamiso somkhiqizo.
Ungathola nezinkinga zethu ezedlule zitholakale!
Abakwa-Notablist nabo bangeze i-Pro, isigaba sesevisi esithuthukisiwe esengeza:
Imiphumela yosesho yesikhathi sangempela - Lapho umkhankaso ufika masinyane, uyasesheka. Ngaphezu kwalokho, inkinobho ethi 'Ukuvuselelwa Okubukhoma' ekhasini lemiphumela yokusesha manje ikuvumela ukuthi uqhubeke ngokuqapha usesho lwe-ad-hoc lwezinto ezintsha ezingenayo.
Ideshibhodi ebukhoma - Ukwenza ibhukhimakhi usesho lwakho oluthandayo kuyindlela enhle yokuhlala phezulu kwezinto, kepha ngabe bekungeke kube ngcono uma ungazibona zonke endaweni eyodwa? Ideshibhodi ebukhoma yenza lokho nje: ihlanganisa imiphumela yawo wonke amabhukumaka akho ekubukweni komugqa wesikhathi okulodwa okuqhubeka ngokuqhubekayo lapho kufika izinto ezintsha. Cabanga ngakho njengokuphakelayo kwe-Twitter kwemikhankaso yezindaba ezikuthandayo.
Izaziso ze-imeyili zesikhathi sangempela - Ezinye izinto azikwazi ukulinda. Okubaluleke kakhulu, ezinye izinto azinakuphuthelwa. Ngezixwayiso zesikhathi sangempela, ungathola i-imeyili esheshayo lapho kufika umkhankaso omusha wanoma imaphi amabhukumaka akho.
Amathuluzi wokuhlela - Imiphumela yosesho isivele ifaka amashadi we-sparkline akhombisa ukuthambekela kwezinsuku ezingama-90 zamagama akho okusesha. Kepha kuvame ukubaluleka ukuqhathanisa imigomo eminingi ukubona ukuthi yini ehamba phambili nokuthi yini ehamba phansi, noma nokuthi yikuphi phakathi kwayo okuthandwa kakhulu. Ngesibonisi, ungenza lokho nje bese ubona imiphumela njengamashadi womugqa noma ophaya.
Tags: ukuncintisana kwe-imeyili okuncintisanayoucwaningo lokuncintisanaimeyiliimeyili imikhuba emihledatabase imeyiliukwakheka kwe-imeyiliizibonelo ze-imeyiliinjini yokusesha ye-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyiliiphephandabaukwakheka kwezindabaugqozi lwezindabauhlu